कर तिर्नुहोस, रेल चढ्नुहोस् ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
कर तिर्नुहोस, रेल चढ्नुहोस् !
भदौ ११, २०७५ सोमबार ९:४०:५० | मिलन तिमिल्सिना
दुई तिहाईको सरकार, चारैतिर करको करकर । प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, कामभन्दा धेरै बोली ।
सडकमा बाढी र भेल । गफ चाहिँ दिनहुँ पानीजहाज र रेल । नागरिकको भान्सामा छैन नुन र तेल । खाली जालझेल र खेल । के के न गर्छु भन्ने ओलीको काम गराईमा मिलेन तालमेल ।
तर तपैंले भनेर हुन्छ ? आइसक्यो रेल । छोड्नुहोस् बाटो, पन्छाउनुहोस् भेल । न घुईंचो, न ठेलम्ठेल । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता जाने चढ्नुहोस् अब रेल ।
हे दैव के हुन लाग्यो भनेर हेर्दा रिंगरोडको बालाजु नजिक चीनबाट केरुङ हुँदै हुईंकिएर आएको अक्सिजनयुक्त उत्तरी रेल । लौ सपना साकार भएछ भन्ने ठानेर सातदोबाटोतिर हेर्दा भारतको रक्सौल हुँदै दक्षिणबाट आएको बिजुली रेल ! हेर्दाहेर्दै देखियो उत्तर र दक्षिणबाट छुटेका अत्याधुनिक रेलको काठमाडौंमा मेल । सुरु भैसकेछ यो जात्राको शहरमा जताततै रेलको जात्रा ! रेल जात्राको अवसरमा मन्त्री, सांसद र मेयरहरु लाखे जसरी नाचेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाले जसरी बासेका छन् ।
कुरा सुन्दै हेटौडा पुग्यो, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसित चिया खायो । कुरा सुन्दै पूर्ब लाग्यो, एक नम्बरका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसित लञ्च खायो । कुरा सुन्दै ७ नंवरका मुख्यमन्त्रीसित बसेर डिनर खायो । अनि ५ नंवरका मुख्यमन्त्रीसित दुई चार चुस्की लाउँदै आएर काठमाडौंमा सुत्यो । सपनामा रेल चढ्यो, सपनामै कुद्यो, सपनामै खायो, सपनामै रमायो, सपना मै मात्यो, सपना मै हाँस्यो । हजुर रेलले पहिले सपना देख्न सिकायो, अहिले सपनामा रेलले त्रसित हुनेगरि कुदाएको कुदायै छ ।
सडकमा रेल चल्न नभ्याउँदै मनमा रेल चल्न थालिसक्यो । दिमागमा रेलका रेखा कोरिन थालिसके । यसैपनि वर्षामा हिलो र चिप्लोले गाडी चलाउन मुस्किल पर्छ । त्यसमाथि यसपाली काठमाडौंमा मेलम्चीको भेल बग्ने भएको छ । मेलम्चीको भेल र छुकछुके रेल एकैपटक काठमाडौं पसे भने सडक अस्तव्यस्त हुन्छ ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेपछि करैकर । दरबारसँगै गाउँ पसेको सिंह देखेर पाइलैपिच्छे डरैडर ।
गरिखानेलाई डर देखाएर कर उठाउने सिंहरुपी सरकारहरुको करको भोक अझै मेटिएको छैन । कहाँ के निहुँ बनाएर कर थप्न सकिन्छ भनेर दाउ हेर्दै बसेका छन् ।
अब धमाधम चाडपर्व सुरु हुँदैछन् । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र गौरापर्व आउँदैछ । कृष्ण जन्माष्टमीमा मन्दिरमा लाइन लागेर मयुरको प्वाँख हातमा बोक्ने चलन छ । त्यसरी मयुरको प्वाँख बोक्नेलाई प्वाँख कर लाग्नेछ । गौरापर्वमा नाचगान गर्ने महिलाले डान्स कर तिर्नुपर्नेछ ।
कुशे औंसीमा कुशको छुट्टै कर तिर्नुपर्छ । त्यही दिन बाबुको मुख हेर्ने चलन छ । अरु दिन बाबुको वास्ता नगर्ने छोराछोरीलाई कुशे औंसीको दिन चाहिँ सित्तैमा किन बाबुको मुख हेर्न दिने रु कुशे औंसीमा बाबुलाई खुशी पार्न खोज्ने छोराछोरीले मुख हेर्ने कर तिर्नुपर्छ । यो करलाई ऐना हेरेको वार्षिक कर भनेर करका सरहरुले आफ्नो तीक्ष्ण बुध्दि प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
गाईजात्रामा नेताजात्रा : ओलीलाई करले च्याप्यो, दाहाललाई रापले